Inkwenkwezi izalwe nguBradley Cooper akayeki ukuhleka kuJimmy Fallon - Indumasi
Eyona Indumasi UBradley Cooper noJimmy Fallon Cinga ukuba ngenene, bahlekisa ngokwenyani kwi'The Show Tonight Show '
UBradley Cooper noJimmy Fallon Cinga ukuba ngenene, bahlekisa ngokwenyani kwi'The Show Tonight Show '
UBradley Cooper kunye Umboniso wangokuhlwa nje umphathi uJimmy Fallon.JamiMcCarthy / imifanekiso ka-Getty kwiNBC
Kuzalwa inkwenkwezi hit ithiyetha kule veki, kwaye emva kwenyanga kwinto ebonakala ngathi iphelele cinezela , Umlawuli wayo kunye nomlingisi ophambili, uBradley Cooper, uhlala esenza njalo phuma nje ngokuthula , kancinci naye ubukrelekrele kunye nokuzithatha kancinci xa kuxoxwa ngemovie apho wayenolawulo olupheleleyo lokuyila. Njengoko sikhawuleza ukuya kwixesha le-Oscar, wayefuna ngokucacileyo ukugcina i-swirl ye-buzz ejikeleze i-movie yakhe engagqitywanga ngokugxeka kunokwenzeka. Kungoko kutheni ekhethe ukuchitha ingokuhlwa nje Umboniso wangokuhlwa nje kunye nokumkani wemibuzo yebhola ethambileyo, uJimmy Fallon.
Ayisiyiyo i-Fallon ngabom kuphela, engenathemba apolitiki , Ungumlandeli omkhulu nje malunga nomntu wonke ohleli esofeni yakhe. Kodwa kule meko ubumnandi bakhe benza uCooper abonakale enomtsalane, kwaye nomtsalane ka-Cooper wona wenza ukuba uFallon abukeke enesiqingatha.
Ngexesha lodliwanondlebe ngolwesithathu ebusuku, abo babini badubula ngokungakhathali, bephinda-phinda ukuhleka kwaye bade badlula ngasemva ukujonga ukuba uCooper wayenxibe isuti efanayo na okokugqibela xa wayevela kumdlalo (wayenayo). I-tomfoolery yabo iyahlekisa kwaye intle, ngokuchanekileyo njengoko bekucwangcisiwe.
Amagqabantshintshi abandakanya ukuxoxa malunga nokuba abalandeli bakhe bazibiza ngokuba zii-mini Coopers (isihloko esivela kwitwitter evela kuMark Ronson, owayengumlingani Kuzalwa inkwenkwezi ‘S phambili ungatshatanga, Nzulu ) kunye no-Fallon bembamba Cooper ngokwabelana ngebali elingenakumangalisa malunga nokudibana kwakhe kutshanje nomntu ofunda naye kwisikolo samabanga aphakamileyo owayenxilile owothuswa ludumo lwakhe (Njani yenzekile, UBrad?! wabuza umntu omdala ofunda naye enxila ngokungakholelwa).
INew York Times : Mamela, watsho kum. Ndibonakala ndimhle. Ufumana ukuba ndenza nje umsebenzi wam. Kodwa akazukufumana buqu nam. Thelekisa olo tshintshiselwano kunye necandelo likaFallon lika-2014 kunye no-Cooper, apho kuzele uvuyo olupheleleyo. Kuya kufuneka uzibuze ukuba zingaphi iinguqulelo ezahlukeneyo zeCooper ezikhoyo, kwaye yeyiphi eyiyo.
I-'Justice League 'iSnyder Sika iTrailer yeyokugqibela apha
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ixesha le-6 yeNkulumbuso: UDorne uya kuba yiNdalo
ii-charles hinton iiarhente zokhuselo
Umboniso bhanyabhanya noJulia roberts kunye noNicole kidman
Inqwelomoya yenqwelo moya yejefferson - umqamelo ongathandabuzekiyo
umlawuli akanampahla yexilongo